GS-3015CE / GS-6020CE Full mechiri na Exchange table Fiber Laser Ịcha Machine - China Dongguan Glorystar Laser
GS-3015CE / GS-6020CE Full mechiri na Exchange table Fiber Laser Ịcha Machine
Machine na mgbanwe table na Cover, ọ nwere ike ịzọpụta oge nke loading ihe onwunwe. Product Atụmatụ ● Na-na gburugburu ogige imewe, belata laser radieshon na zere ihe ọ bụla n'ibu mmerụ. ● adopts na exchangeable worktable ịzọpụta loading na ebutu oge, na chieve elu ọrụ arụmọrụ. ● High kpomkwem egweri gia na gia ogbe, ala ụzụ na elu kpọmkwem. Na ọdabara ụlọ ọrụ ọtụtụ-eji nile di iche iche nke metal ngwaahịa ọrụ dị ka mpempe akwụkwọ metal nhazi, cookware na b ...
Machine na mgbanwe table na Cover, ọ nwere ike ịzọpụta oge nke loading ihe onwunwe.
arụ ọrụ ebe 3000 * 1500MM / 4000 * 2000MM / 6000 * 15000mm
Previous: F-6018T tube / Ọkpọkọ Fiber Laser cutter
Osote: Eriri Laser Ịcha Machine na Exchange Isiokwu
1000w Fiber Laser Ịcha Machine
3000w Fiber laser Ịcha Machine
700w Fiber Laser Ịcha Machine Price
High Ike eriri Laser Ịcha Machine
Metal Fiber Ịcha Laser Machine
mpempe akwụkwọ metal Fiber Laser Ịcha Ma chine